मर्निङवाकको काइदा ः युवाहरुलाई फाइदा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मर्निङवाकको काइदा ः युवाहरुलाई फाइदा
२०७१ बैशाख १९, शुक्रबार ०३:०१ गते
मर्निङवाक यतिखेर फेसनजस्तै बनेको छ । चितवनमा हपहपी गर्मी बढेका बेला मर्निङवाकमा निस्कनेहरु कमिलाको ताँतीजस्तै देखिन थालेका छन् । यतिखेर मर्निङवाक दालभात बराबर भइरहेको छ । बाटो–घाटो, पुल–पुलेसा, चौर–चौतारा सबैतिर मर्निङवाक गर्नेहरुको धुइरो लागिरहेको छ । मर्निङवाक कसैका लागि बाध्यता बनिरहेको छ भने धेरैका लागि रहर बनेको छ । केही वर्ष अघिसम्म मर्निङवाकमा निस्कनेहरु ‘रोगी’ मानिन्थे । यतिखेर मर्निङवाक नै नगर्नेहरु महारोगी मानिन थालेका छन् ।
हामी नेपालीहरु सुत्ने मामिलामा एकदमै अगाडि छौँ । चाँडै उठ्न नसक्नेहरु बिहान सात बजे उठेर भए पनि मर्निङवाकमा निस्किएको देख्न पाउँछौँ । चितवनवासीलाई मर्निङवाकको लहरले एकाबिहानै व्युँझाइदिएको छ । अहिले औसत एक घर बराबर एकजना मर्निङवाकमा निस्कने गरेका छन् । मर्निङवाकका फाइदाहरु मर्निङवाक गर्नेहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ । बिहान आठ बजेसम्म सुत्ने कुम्भकर्णहरुलाई के थाहा ?
सुगर, प्रेसरका बिरामी, अध्यधिक मोटोपन भएका व्यक्तिहरु, नसासम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिलाई मात्र होइन, स्वस्थ मानिसहरुका लागि पनि मर्निङवाकले फाइदा पु¥याउँछ । खेलाडी, शारीरिक सुगठन चाहने व्यक्ति र शारीरिक श्रम नगर्ने व्यक्तिहरुका लागि मर्निङवाक अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । मर्निङवाकको लाभ त कति छन् कति । अल्छीका लागि त ओछ्यान नै प्यारो हुन्छ । कसैका लागि योग–साधना प्यारो हुन्छ । बिहान शरीर फुर्तिलो बन्यो भने त्यसले दिनभरिका लागि ‘फ्रेस’ बनाउँछ । त्यसैले भनिन्छ नि, हरेक दिनको संकेत बिहानीले नै गर्दछ ।
मर्निङवाक व्यायामका लागि भन्दा पनि लहैलहैमा फेसनकै रुपमा घुम्नेहरु देखेर भने मलाई हाँसो उठेर आउँछ । गत चैतअघिकै कुरा गरुँ । मर्निङवाकमा निस्कने महानुभावहरु बिरलै भेटिन्थे । भेटिहाले पनि फाट्टफुट्ट हिँड्ने सुगर, प्रेसरका बिरामीहरुमात्र देखिन्थे । कतै–कतै खेलाडीहरु दौडिन्थे । सेना, प्रहरीहरु परेडका लागि दौडिन्थे । आइमाई, केटाकेटी, युवा ब्रगेल्ती कुँदेको देखिएको त अहिले नै हो । यी सबै मर्निङवाकमा नियमित हिँड्ने हुन कि होइनन् भनेर अड्कल काटेको मर्निङवाकमा त गर्मीले आलस–तालस बनाएर बिहानै उठ्नेहरु पो रहेछन् । यस्तैमा एकजना मित्रलाई सोधेँ, तपाइँ मर्निङवाक किन गर्नुुहुन्छ ? उनले भने, ‘पहिलो त रहरले हो । दोस्रो देखासिकीले र तेस्रोचाहिँ गर्मी छल्नका लागि ।’
अर्को समर वाकमाहिँड्नेलाई पनि त्यही प्रश्न सोधिहेरेँ उनले भने, ‘म त बिहान समाचार सुन्नका लागि हो ।’ त्यसो त मर्निङवाकमा हिँड्नेहरु साठी प्रतिशतभन्दा बढीले त समाचारै सुन्छन् । युवाहरुले गीत घन्काएर वा गाउँदै हिँड्छन् । स्कुले विद्यार्थीदेखि सत्तरी वर्षे हजुरबा÷आमाहरुसम्म मर्निङवाकमै रमाइरहेका हुन्छन् । एकजना ‘प्रोफेसनल’ मर्निङवाक गर्ने भलाद्मीलाई सोध्दा उनले व्याड्मिन्टन खेल्नका लागि तीन किलोमिटर दिनहुँ मर्निङवाक गर्ने गरेको बताए । यतिखेर बिहान तीन बज्दा नबज्दै बाटोभरि मानिसहरुको भीड जम्मा भइसकेको हुन्छ । सडकको हल्लाले आजभोलि म पनि बिहानै उठ्ने गरेको छु । औषत सात बजेसम्म सुत्ने मलाई पनि यो मर्निङवाकले एकाएक मोहनी लगाइदियो ।
पहिलो दिन न्वारानदेखिको बल लगाएर तीन किलोमिटर दौडेर फर्किएपछि स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ भएर मर्छु कि जस्तो भो । म्याराथन खेलाडीहरु दश÷पन्ध्र किलोमिटरसम्म कसरी दौडन्छन् होला ? मुटु फुट्लाजस्तो भएपछि भोलिपल्टदेखि विस्तारै हिँड्न थालियो । बानी परेपछि त मर्निङवाक नशाजस्तै बनिहाल्यो । ज्यान त भर्खरकै जस्तो बनिहाल्यो । पुन्टे भुँडी घटेर स्याम्म भो, अनुहारमा छुट्टै चमक आयो । शारीरिक स्फूर्ति बढेर भर्खर टिनएजमा प्रवेश गरेको जस्तो महसुस भो । अनि पो थाहा भो, भुँडीवालाहरु अपहत्ते गरेर किन मर्निङवाक जाने रहेछन् भनेर । मर्निङवाक जाने हो भने ‘स्लीम’ बन्नको लागि थोरै खाना खानु पर्दोरहेनछ । न त डाइटिङका लागि भोकै बस्नु आवश्यक पर्दोरहेछ । मर्निङवाकले आमूल परिवर्तन ल्याइदिएपछि एक भलादमी भन्दै थिए, ‘मर्निङवाकले मेरो ढल्केको जवानी फिर्ता ल्याइदियो ।’ पचास वर्षे युवा पनि तीस वर्षका जस्ता हुने भएपछि मर्निङवाक किन नगर्ने ?
मर्निङवाक एक सिजनकै लागि भए पनि, गर्मी छल्न भए पनि वा देखासिकी गरेरै भए पनि बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको आकर्षण बढ्नु खुसीकै कुरा हो । युवाहरुमा त जे पनि फेसनकै रुप धारण गर्ने गर्दछन् । युवा जोडीलाई त मर्निङवाक बरदान नै सावित भइरहेको छ । किनभने, अहिले मर्निङवाक पनि एकप्रकारको ‘डेटिङ स्पट’ नै भइरहेको छ । जति कडा बाउआमा भए पनि मर्निङवाकमा जान्छु भनेपछि भो पर्दैन कसैले भन्न सक्दैन । अनि मर्निङवाकमा गएपछि ‘डेटिङ’ भइरहेको भए पनि कसैलाई कसैको केही मतलव हुँदैन । मर्निङवाकको बहानामा प्रेमिकाको अँगालोमा भए पनि कसैले प्रश्न उठाउने हैसियत राख्दैन । अर्काको विषयमा ‘पर्सनल इन्र्टफेयर’ गर्ने अधिकार अहिले कसलाई छ र ?
त्यही भएर होला कोही जोडी पुलमा, कोही चहुरमा, कोही पार्कमा, कोही नहरमा, कोही मन्दिरमा, कोही पोखरीको डिलमा त कोही बगैँचामा बसेर मायाप्रीतिका कुराहरु गरिरहेका भेटिन्छन् । आफ्ना प्रेमी–प्रेमिका भेट्न नपाउने कुरा पनि आएन । त्यही पनि बिहानको शान्त, चिसो र कञ्चन हावामा । हामीकहाँ अझै पनि व्यवस्थित पार्कहरु छैनन् । हाम्रा युवाहरु मर्निङवाकको बहानामा खुल्ला सडकमा डेटिङ गर्नुपर्ने नियति छ । समाचार सुन्ने लालसामा खेतको आली, कलभर्ट र चौरमा प्रेमालाप गर्नु परिरहेको छ । कति गाह्रो छ विचराहरुलाई १ बिहान धेरै ‘डिस्टर्ब’ भएपछि केही जोडी ‘इभिनिङवाक’ गर्न बाध्य छन् । गोधूलि साँझमा इभिनिङवाक गर्नुको मज्जै बेग्लै हुँदो हो । आफूलाई इभिनिङवाक गर्ने मौका कहिल्यै जुरेन ।
हरेक शुभ कार्यको सुरुवात बिहानै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । र, बिहानै गरिएका कामहरु सबै क्षेत्रबाट सुरक्षित पनि हुन्छन् । मर्निङवाकको काइदा एक फाइदाहरु भने अनेक छ । यसको आकर्षक पनि दिन दुई गुना र रात चार गुनाको दरले बढ्दो छ । थोरै मात्रले व्यायामका लागि र निरोगी हुनका लागि मर्निङवाक गरे पनि धेरैको प्रयोजन छुट्टै छ । म पनि नियमित मर्निङवाकमा जाने व्यक्ति होइन । यो गर्मी रहुन्जेल पनि हुनसक्छ वा महिना दिनपछि नै टुट्नसक्छ । अहिले भने एकदिन मर्निङवाक जान छुट्यो भने के के न छुटेजस्तो लाग्छ । ज्यान त्यसै निरस र विरसिलो हुन्छ ।
हुनेहरुको नियमित मर्निङवाक भइरहोस् । धेरै खाएर अपच भएपछि, ह्याङओभर हटाउनका लागि अनि देखासिकीमा दुई÷चार दिन मर्निङवाक गरेर काम छैन । निन्द्राले छाडेपछि त जसले पनि मर्निङवाक गर्न सक्छ । म चाहिँ डेटिङका लागि होइन, निरोगी बन्नका लागि पनि होइन । हल्लाखल्लाले निन्द्रा खल्बलिन थालेपछि बाध्य भएर मर्निङवाकमा जान थालेको हूँ । बिहान–बिहानै सडकमा यस्तो कोलाहल हुन्छ कि मर्निङवाकमा हिँड्ने मान्छे हो कि, जात्राको रमाइलो हो अझै ठम्याउन सकेको छैन । कतिपटक त एकाबिहानै के दुर्घटना भएछ भनेर उठेर हेर्दा मर्निङवाकको लर्को देखेर अचम्ममा परेको छु ।
आफूसमेत मर्निङवाकमा हिँड्न थालेपछि अर्कै दुनियामा गएजस्तो महसुस हुँदोरहेछ । मर्निङवाकमा निःशुल्क गीत÷सङ्गीत सुन्न पाइन्छ । ताजा समाचार सुन्न पाइन्छ । दोहोरी गीत, अन्ताक्षरी र ‘ननभेज जोक्स’ पनि अघाउञ्जेलसम्म सुन्न सकिन्छ । अझ मर्निङवाकमा कतै क्याटवाक गरिरहेको देख्न सकिन्छ । कतै मोडलिङ भइरहेको हुन्छ । कतै फिल्म सुटिङ गरेजस्तो दृश्यसमेत देख्न पाइन्छ । दुई÷चार दिनपछि समयको सिफ्टअनुसार टोली आफै निर्धारण हुन्छ । युवाहरुको युवा नै साथी भइन्छ । बूढाहरुको बूढा नै साथी जुर्छ । साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने समय नहुनेका लागि मर्निङवाक बरदान सावित भएको छ । प्रेमीप्रेमिकाका लागि त यो स्वर्णीम समय हो । मर्निङवाकमा सबैको कल्याण हुने नै छ । रोगीहरु निरोगी बन्दै जानेछन् । जोडीहरुको प्रेम फस्टाउनेछ । एक दुई महिनाको रमाइलो नै सही, मर्निङवाकमा धेरै युवाहरु थपिँदै जानेछन् । प्रेम जोडी अलि अगाडि नै उठेर मर्निङवाकमा निस्कन सके कतैबाट डिस्टर्ब पनि हुँदैन । अव तीन बजे होइन, बिहान १ बजेदेखि नै मर्निङवाक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो समय कुकुरहरु पनि मस्त निन्द्रामा हुनेछन् । कुखुराहरु पनि बास्ने छैनन् । गाडीघोडा पनि चलेका हुँदैनन् । चराहरु रुखमै बास बसिरहेका हुनेछन् । शान्त र एकान्त ठाउँ भएपछि जोडीहरुको मनोकांक्षा पूरा हुनेछ ।